MFI-amakhebuli: izinga ithopholoji noma ukukhiqizwa yasekuqaleni - ongakhetha kuwo?
Noma yimuphi yasekuqaleni ekhanya ikhebula kusukela Apple, manje noma ngokuhamba kwesikhathi kuza laphinde labhidlika. Uma ujwayele ukubeka ngegajethi intambo ukushaja kancane kancane frays ngesikhathi ipulaki. Bese kufika isikhathi ukubheka esikhundleni. Thenga ekhanya ikhebula Apple akunzima, kodwa kudivayisi kuhle ezibizayo, ngaphezu kwalokho, kubuye kube izinyanga ezimbalwa nakanjani ukuwa phezu. Esimweni esinjalo, abaningi bakhetha eliphezulu kwemifanekiso imikhiqizo yasekuqaleni.
Manga noma ilayisensi?
Ekhanya umkhiqizo izintambo, okuyinto kuyohambisana zonke izidingo lobuchwepheshe izimoto Apple, kunzima kakhulu iphuzu lobuchwepheshe umbono. Inkampani ukuze azivikele mbumbulu kuwo wonke umkhiqizo yasekuqaleni Babhokile chip ekhethekile. Kuyinto Apple igajethi yakhe ikhomba "bomdabu" intambo. ukusetshenziswa ikhebula ngaphandle chip enjalo kuyingozi: esimweni engcono, idivayisi azobika nephutha futhi angeke icala, futhi neze - nje aphule. Lokhu kungaba njengoba ukwehluleka isofthiwe noma kulimaze isixhumi.
Kodwa lokhu akusho ukuthi ngeke kusadingeka ukuthenga ungqo Apple ekhanya ikhebula. Phela, kukhona izinkampani wahlanganyela ekukhiqizeni imikhiqizo certified, basebenzisa original Apple ubuchwepheshe. Kulokhu, imikhiqizo certified zisekhona ishibhile ngaphandle "apula kweqiniso" amadivaysi.
Eshibhile ukuhlukanisa mbumbulu kumkhiqizo ilayisensi kuphela. Uma iphakethe has uphawu MFI (YENZIWA FOR Apple), ikhebula ekhiqizwa ngokuvumelana yasekuqaleni Apple ubuchwepheshe.
Certified izintambo Lightning (MFI) kusukela Canyon
Asbis Group - one of the izinkampani ngobukhulu zamazwe ngamazwe, onguchwepheshe emkhakheni kolwazi nobuchwepheshe bezokuxhumana. Omunye amayunithi lokhu giant zezimboni - Canyon brand. Sha Sekuyisikhathi eside kwaziwa ezweni lethu, kuhlanganise njengendlela producer eliphezulu ekhanya izintambo ukuthi certified ngezindinganiso Apple, benethuba ukusebenzisa uphawu olusemthethweni MFI (YENZIWA FOR Apple) on the isembozo.
nokwethenjelwa ukuqina isiqinisekiso
Umugqa Canyon ingacosha zikanokusho yokuqala eqinisekisiwe MFI-ikhebula ukuhlangabezana ngokugcwele izindinganiso ukusebenza Apple. Yonke imikhiqizo kukhona iyahambisana kokubili iPad, ne-iPod noma i-iPhone. Ixhuma ejwayelekile, ngokusebenzisa i-USB isixhumi. amakhebuli ezinjalo ziwubufakazi kahle ukushaja amagajethi kanye exchange okusheshayo kolwazi phakathi kwamadivayisi. Ziyakwazi okunokwethenjelwa futhi iqine. Zonke izinto baphathe yesiqinisekiso kwabakhiqizi.
Design zikanokusho yasekuqaleni
Elikhuhluziwe Canyon imikhiqizo - esimnandi, ukuklanywa. Funda kabanzi mayelana Canyon brand kwi website esemthethweni: http://canyon.ru. Izintambo yalesi brand akuyona izinga nje okusezingeni eliphezulu, zingaba accessory stylish umphelelisi isithombe imfashini. A ezahlukene imibala egqamile, ukwakheka engavamile design - konke lokhu kwenza izintambo umbukwane ngempela. Ngamunye owawina lo "apula" igajethi uzokwazi eyolanda ikhebula ukunambitha, kuyilapho egcizelela ubuntu babo.
CNS-MFIC3DG - imodeli esisebenzayo hhayi kuphela, kodwa futhi stylish. Intambo Ubude - 1 m, kwanele kahle anakekele ngegajethi kwedeski noma ku-nightstand. enamathela Nokwelukiweyo kakhulu ukumelana nokuhuzuka. Imodeli itholakala segolide, sakuba futhi umane grey.
CNS-MFIC2DG - intambo ukuthi awudingeki sicacise. Lokhu MFI-ikhebula It has engavamile ukuma flat efana tape. Intambo akusho tangle hhayi eminakweni ifindo, kulungile phinda. Le modeli has a ubude 0,96 m kuyinto ngempela compact, akuthathi isikhala kakhulu kudeskithophu futhi kalula esifanelana kunoma iyiphi esikhwameni. Umenzi inikeza ngemibala emithathu intambo obomvu, oluhlaza futhi grey.
CNS-MFICAB01BL - lokhu imodeli baziswa abathandi amadivayisi zikanokusho yasekuqaleni. Abagqugquzeli imibala zakudala nakanjani sinake izintambo omnyama nomhlophe. oluhlaza ewubukhazikhazi izintambo mpungana ngeke sijabulise abalandeli izinqumo elikhanyayo ngokugqamile.
Okuningi izintambo MFI lapha: http://canyon.ru/?s=MFI+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Lezi izintambo iOS-amadivayisi iyiqaphele njengezibulo yasekuqaleni. Amagajethi musa ukukhipha imilayezo yamaphutha, futhi awukwazi ukhathazeke azishiye bakhokhise ubusuku.
Izindlela ezintathu aphonse imali "Kyivstar" ukuze "Kyivstar"
Indlela ukwazi ifoni yakho? Izimfihlo zigcwaliseka
"Megaphone" tariff "Transition to Zero". Uhlolojikelele wemali
Indlela ukudlulisa imali "megaphone" ukuze "MegaFon": izindlela ethandwa
Indlela hlola lonke emgwaqweni MTS Smart olungami?
Umqulu othakazelisayo nama-apula namantongomane avela kumakhekhe we-cottage cheese
I isisu izidakamizwa "Trigrim": yokusetshenziswa
Asparkam: izinkomba ukusetshenziswa
Kuyini GDP umnotho? Gross womkhiqizo wakuleli
Nicholas Polissky - uyise Russian ezweni art
Kwenhliziyo ukuqapha Polar RS300X: incazelo, izici kanye nokubuyekeza of the abanikazi
Izakhiwo kanye nezimiso zakwa ulwazi zefilosofi (kafushane)